Kooxda Manchester United oo go’aan ka gaartay saxiixa Weeraryahanka Tottenham Hotspur ee Harry Kane… (Miyey la soo wareegayaan xagaagan?) – Gool FM
Kooxda Manchester United oo go’aan ka gaartay saxiixa Weeraryahanka Tottenham Hotspur ee Harry Kane… (Miyey la soo wareegayaan xagaagan?)
Haaruun July 11, 2021
(Manchester) 11 Luulyo 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lagu soo warramayaa inay go’aansatay inaysan wax heshiis ah la gaarin xagaagan Weeraryahanka Tottenham Hotspur ee Harry Kane.
Kabtanka Xulka England ayaa loo maleynayaa inuu doonayo inuu raadsado meel cusub si uu u baadi goobo koobkiisii ​​ugu horreeyay weyn ee heer kooxeed, laakiin Daniel Levy ayaa la filayaa inuu ka hor tago oo uu iska diido dalabyada ka imaanaya kooxaha xiiseynaya ee ka hooseeya 150 milyan oo gini.
Intaa waxaa sii dheer, iyadoo Man United ay heshiis hal sano ah la gaartay weeraryahankooda haatan ee Edinson Cavani, Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa la rajeynayaa inuu mudnaanta koowaad siiyo boosaska kale inta lagu jiro suuqa xagaaga.
Warbixin dhowaan soo baxday ayaa sheegaysay in Red Devils ay qorsheyneyso inay 100 milyan oo gini iyo lacag kaash ah kula soo wareegto Kane, laakiin Jariiradda The Express ayaa warinaysa in soo jeedinta noocaas ah ay tahay wax aan jirin.
Wargayska ayaa warbixintiisa waxa uu intaa ku daray in Solskjaer uu xoogga saarayo dib u dhiska daafac dhexe iyo khadka dhexe kaddib markii uu heshiis la gaaray Borussia Dortmund oo uu kala soo wareegay Jadon Sancho, halka Mason Greenwood la filayo in fursado badan la siiyo bartamaha xilli ciyaareedka soo socda.
Kane ayaa dhaliyay afar gool tartanka Euro 2020 ilaa iyo haatan, wuxuuna hoggaamin doonaa Xulka qaranka Saddexda Libaax kulanka final-ka ee ay caawa wajahayaan dhiggooda Italy.
Italy vs England: Labada xul oo caawa kulmaya markoodii 28-aad, Yaa inta ugu badan adkaaday kulammadii hore ka hor kulankooda Final-ka ee EURO 2020?
Maxaa ka soo kordhay heshiiska ay kooxda Chelsea ku dooneyso Erling Haaland?